Humour – စာမကျြနှာ4– Healthy Life Journal
တကယ့် လျှို့ဝှက်ချက်က ဒီလိုပါ …
“ဦးလေးတို့ လင်မယားနှစ်ယောက် အခုလိုအိမ်ထောင်သက်တမ်းအရှည်ကြီး တစ်လျှောက်လုံး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဘယ်လိုနားလည်မှုတွေပေးပြီး လက်တွဲခဲ့ကြတာလဲ နည်းနည်းလောက် ပြောပြပါလားဗျာ..” “ငါတို့လင်မယားက ယူပြီးထဲက တစ်ပတ်ကိုတစ်ကြိမ် စားသောက်ဆိုင်ကောင်းကောင်းကိုသွားတယ်၊ စားစရာကောင်းကောင်းလေးမှာ၊ ဖယောင်းတိုင်မီး အရောင်လေးနဲ့ တေးသံသာသာလေးနဲ့ အဲ့လိုမျိုးလေး သွားစားပြီး စိတ်ညစ်တာတွေကို ဖြေဖျောက်တယ်ကွ…” “တစ်ခြားစုံတွဲတွေလည်း...
မြို့ငယ်လေးတစ်မြို့မှာ သွားဆေးခန်းအသစ် တစ်ခန်းစဖွင့်တဲ့အခါ ကလေးငယ်တွေ ဆေးခန်းလာရမှာ မကြောက်အောင် ဆေးခန်းနာမည်ကို “ နာကျင်မှုကင်း ဝေး” လို့ ပေးထားပါသတဲ့။ တစ်ရက်ကျတော့ မြို့ခံကလေးမလေးတစ်ယောက်က တွေ့သမျှလူတွေကို ဒီဆေးခန်းက အတုကြီး . . ဆေးခန်းနာမည်က မှားနေတာလို့ လိုက်ပြောနေတော့တယ်။...
တစ်သက်လုံး မမေ့စေရဘူးမှတ် . . .
မကြာခင် မင်္ဂလာဆောင်တော့မယ့် သတို့သားလောင်းတစ်ယောက်က အိမ်ထောင်ကျတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းကို မေးပါတယ်။ “မိန်းမတွေက မင်္ဂလာဆောင်နှစ်ပတ်လည်နေ့တွေဆိုရင် အမှတ်တရရှိမှ သဘောကျတာဆို… ငါကလည်း သတိမေ့တတ်တော့ နှစ်ပတ်လည်နေ့တွေကို မမေ့အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ အကြံပေးပါဦး . . .” “မခက်ပါဘူးကွာ… တစ်နှစ်လောက်ပဲ မေ့ကြည့်လိုက်ပါ…...
ခွဲစိတ်ခန်းထဲက မေ့ဆေးအရှိန်ကြောင့် သတိမရတစ်ချက်၊ ရတစ်ချက်ဖြစ်နေသော ယောက်ျားဘေးတွင် မိန်းမဖြစ်သူကစောင့်လျက်ရှိသည်။ အချိန်နည်းနည်းကြာသော် ယောက်ျားဖြစ်သူ သတိတစ်ချက်ရလာသည်။ “ ယောက်ျား . . . ကျွန်မဘေးမှာရှိတယ်… ရှင်နေလို့ကောင်းရဲ့လား . . .” “အင်း … မင်းအရမ်းကိုလှနေပါလား...
ဘယ်လိုမှ ပြန်တွေးလို့ မရတော့ဘူး
“ဆရာ… ကျွန်တော့်ကိုကူညီပါဦး၊ ကျွန်တော်ကိစ္စတစ်ခုကိုပြန်စဉ်းစားနေတာ ဘယ်လိုမှ သတိမရတော့ဘူးဗျ၊ မှတ်ဥာဏ်တွေ အားနည်းကုန်ပြီထင်ပါတယ်ဗျာ…” “တစ်ခုနှစ်ခုလောက်ကတော့ လူတိုင်း ဒီလိုပဲသတိမေ့တတ်ပါတယ်၊ ပြန်သတိရအောင် တခြား ဆက်စပ်တဲ့အကြောင်းအရာကို အရင်စဉ်းစားပြီးမှ တဖြည်းဖြည်းပြန်တွေးယူရတယ်ဗျ…” “ဒီလိုပါ… ကျွန်တော် သူ့ကို ဘယ်နေ့ ဘယ်အချိန်က လက်ထပ်ခဲ့လဲဆိုတာလည်း မှတ်မိတယ်၊...
အမျိုးသားတစ်ယောက်က ချစ်စရာမွေးခါစကလေးလေးနှစ်ယောက်ကို လက်တစ်ဖက်စီမှာ ပွေ့လျက် ရထားဘူတာတွင် ရထားစောင့်နေသည်။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကလည်း ရထားစောင့်နေရင်း ကလေးလေးနှစ်ယောက်ကိုတွေ့ပြီး အမျိုးသားကြီးကို စကားစမြည်လာပြောလေသည်။ “ ကလေးလေးတွေက ချစ်စရာလေးတွေပါလား… သူတို့နာမည် ဘယ်လိုပေးထားလဲ…” ” မရှိဘူး..” ” နာမည်မပေးရသေးဘူးလား.. ဘယ်သူ့ကို အရင်မွေးတာလဲရှင့်…”...
ဘီယာဆိုင်တစ်ဆိုင်ထဲသို့ အသက်ကြီးကြီး လူတစ်ယောက် ၀င်လာပြီး ဘီယာမှာသောက်လေသည်။ အနည်းငယ် မူးလာချိန်တွင် ဘေးဘယ်ညာ ကြည့်လိုက်ရာ ဗလတောင့်တောင့်နှင့် လူမိုက်ပုံစံ ခပ်ကြမ်းကြမ်းတစ်ယောက်ကို လှမ်းတွေ့လိုက်သည်။ ထိုဗလကြီးထိုင်နေတဲ့ စားပွဲကိုသွားပြီး မျက်နှာချင်းဆိုင်ကာ ရန်စလေသည်။ “ကောင်လေး… ငါ မနက်က မင်းရဲ့အမေနဲ့ တွေ့ခဲ့တယ်ကွာ…...